Chọrọ onye ọka iwu mkpokọta? Kpọtụrụ Law & More
Kwụ andgwọ na itinye Aka na Akụ na Netherlands
Nchoputa gosiputara na 30% nke mbufu na Netherlands na-akpata site na akwukwo ugwo a na-adighi akwughi ya. Companylọ ọrụ gị nwere onye ahịa nke na-akwụbeghị ụgwọ? Ma obu onwere gi onwe gi ma enwere onye ji gi ego o ji gi ego? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More ndị ọka iwu na-anakọta ụgwọ.
OL nwere ike ịdebanye aha ya?
Iwu nchịkọta ụgwọ
> Ọbịbịa nke ụlọ ọrụ na-anakọta ụgwọ
> Usoro nke usoro nnakọta
• Naanị ndị ọka iwu na-anakọta ụgwọ iji dọọ usoro iwu maka nkwupụta karịrị € 25.000,00.
Ikike ikike ịnara ala na ego onye ji ya ụgwọ
• Naanị onye ọka iwu na-anakọta ụgwọ iji nye ikike ịgba akwụkwọ.
• Naanị ndị ọka iwu na-anakọta ụgwọ iji ikike ịnwere ikpe maka nnakọta ụgwọ mba ofesi.
• O tozuru oke iji dozie esemokwu nke iwu. Onye ọka iwu na-anakọta ụgwọ dabara adaba iji nye ụzọ edozi ahaziri aha ya na nyochawa ma kwughachi ihe nchebe.
Ọ na --eme mgbe ọ bụla n’usoro nnakọta, ọ ka dị mkpa ịgbanwe site n’aka otu ụlọ ọrụ na-anakọta ma ọ bụ kọmịị na ọka ikpe ịnakọta. N'ọnọdụ dị otu ahụ ọ ga-adị mfe ma hazie ya karịa ịnọ otu ebe otu ebe, ebe amaara gị ebe ejirilarị gị faịlụ.
n'ime oge ahụ e kwekọrịtara. ”
Ọbịbịa nke ụlọ ọrụ na-anakọta ụgwọ
Maka usoro nchịkọta ọ bụla, a ga-emerịrị ọtụtụ usoro. Nzọụkwụ mbụ bụ ịgwa onye ahụ ji ya ụgwọ na ya anaghị arụzu ụgwọ ọrụ ya. Nke a bụ n’ihi na ị ga-enye ya ohere ịkwụ ụgwọ n’oge ezi uche na-agaghị akwụ ụgwọ ọ bụla. Must ga-ezigara onye ji ya ụgwọ ihe ncheta ederede na mmetụta a. A na-akpọ ncheta a ndabara. A na-ewere oge dị ka ụbọchị iri na anọ dị ka oge ezi uche dị na ya nke achọrọ onye ji ụgwọ ka ọ kwụọ ụgwọ ahụ. N'ezie, Law & MoreNdị ọka iwu nwere ike ịchọtara gị ndabara.
Ọ bụrụ na ezigaghị ozi banyere ndabara, onye ọka ikpe ga-ajụ ebubo ọ bụla maka mmebi iwu. Agbanyeghị, enwere ọnọdụ ebe adịghị mkpa iziga ọkwa nke ndabara, dịka ịhapụ nkwekọrịta na agaghị ekwe omume. Na agbanyeghị, ọ ga-adị mma ma ị na-ezigara ọkwa oge niile na ndabara ka akpachapụ anya. Ọ bụrụ na a kwadoghị arịrịọ maka ịkwụ ụgwọ, anyị nwere ike ịmalite usoro nnakọta.
.Zọ anọ nke nnakọta aka nri
Kpọtụrụ Law & More
Anyị na-arịọ onye ji ya ụgwọ ka ọ kwụọ site na ngosi nke ndabara
Anyị na-ahazi mkparịta ụka iji mee ka onye ji ya ụgwọ kwụọ ụgwọ ma ọ bụ mee nhazi ịkwụ ụgwọ
Anyị na-amalite usoro iwu kwadoro ma weghara ihe onwunwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa
Usoro nke usoro nnakọta
E nwere usoro abụọ enwere ike ịnakọta nhazi: usoro udo, makwaara dị ka usoro ịme ihe ike na usoro ikpe ..
Ọ bụrụ na mmekọrịta dị n'etiti ndị ọzọ dị mma, ọ ga-adị mma ka ị buru ụzọ mee udo. N'oge a, anyị na-agba ndị na-agba ụgwọ ume ka ọ kwụọ ụgwọ site n'ihe ncheta ederede na kọntaktị ekwentị. O kwere omume na mkparịta ụka ndị a na mkparịta ụka ga-eduga na nhazi ịkwụ ụgwọ. Anyị na-akwado ka edobe nhazi ịkwụ ụgwọ. Ndị ọka iwu anyị na-anakọta ụgwọ nwere ike ilekọta nke a. Abamuru nke usoro udo bụ na mmekọrịta dị n'etiti ndị ọzọ anaghị emebi emebi nakwa na enweghị ụgwọ maka usoro ikpe iwu.
Ọ bụrụ na onye ji ya ụgwọ ma ọ bụ jiri ụgwọ ịkwụ ụgwọ mechie usoro udo, enwere ike ịmalite usoro iwu. Ọ ga-ekwe omume ịhapụ usoro udo ma bido ikpe iwu ozugbo. N'oge usoro iwu, anyị na-ekwu na ị ga-akwụ ụgwọ ego pụrụ iche na ụgwọ nnakọta n'ihu ụlọ ikpe. Tupu ịmalite usoro iwu, enwere ike ijide ihe onye ji ya ụgwọ. A na-akpọ nke a ihe ọdịdọ. Mgbakwunye nkwanye ugwu bu n’obi iji hụ na onye ji ya ụgwọ enweghị ike ịkwaga ihe onwunwe tupu ụlọ ikpe ahụ ekpebie, ka i wee nwee ike weghachite ego gị n’aka onye ji ya ụgwọ. Ọ bụrụ na onye ọka ikpe ekenye gị okwu gị, a ga-atụgharị mkpado ga-abụ ihe mgbakwunye na mmechi. Nke a pụtara na kotima ga - ere ihe ndị ahụ agbakwunyere na ọha ma ọ bụrụ na onye ji ụgwọ ahụ anaghị akwụ ụgwọ. A ga-eji ego sitere na akụ ndị a akwụ ụgwọ maka nkwupụta gị. Law & MoreNdị ọka iwu na-anakọta ụgwọ nwere ahụmịhe na ngalaba nke mgbakwunye ma nwee obi ụtọ inyere gị aka n'oge usoro ikpe.
Na - egbochi ihe egwu
Law & More na-enyekwa nkwado iji gbochie ihe egwu ndị metụtara ịkwụ ụgwọ na ịkwụ ụgwọ ikpe n'oge. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-adụ ndị ahịa ọdụ ka itinye ya n'ogo ha na usoro ịkwụ ụgwọ ọnọdụ ha nwere ike izere ihe ọjọọ na ikpe ịkwụ ụgwọ n'oge. Ga-achọ ịmatakwu banyere nke a? Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu na-anakọta ụgwọ Law & More.